सामाजिक सञ्जालबाट पार्टी चलाउन खोज्दा हामी विभाजन भयौं - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
विवेकशील साझाका नेता मुमाराम खनाल
२०७४ साल साउन ११ गते रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टी र उज्ज्वल थापाले नेतृत्व गरेको विवेकशील एक भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो । वैकल्पिक शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने भन्दै गठन भएको ती दुई दल अहिले फेरि फुटेका छन् । केही दिनअघि मात्रै १६ जना केन्द्रीय सदस्यसहित थापाले निर्वाचन आयोगमा गएर नयाँ दल दर्ता गरेपछि पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भएको हो । विभिजनपछि निकै चर्चा भयो ।
थापा समूहले मिश्र समूहलाई राजनीतिक परिपक्वता नभएको आरोप लगायो भने मिश्र समूहले थापा समूहले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा अघि बढ्ने औकात नै नदेखाएको आरोप लगायो । पार्टी विभाजनपछि मिश्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई जति उचाले पनि विरोध नगर्ने मात्रै भनेनन् कुनै बेला फेरि विवेवकशीलसँग एकता हुने आशा पनि व्यक्त गरे । तर, मिश्रले भनेजस्तो यी दुई पार्टी छिट्टै एक होलान् भन्ने अनुमान गर्न पनि मुस्किल छ । त्यसो त साझा पार्टीका केही नेताले देशभरि नै विकेकशील साझाको माहोल बनेपछि आत्तिएर सम्हाल्न नसक्ने भएपछि पार्टी छाडेको समेत आरोप लगाएका छन् । विवेकशील साझा किन फुट्यो ? के–के थियो फुट्नुका कारण ? अब एक हुने सम्भावना छ त ? यिनै विषयमा विवेकशील साझाका नेता मुमाराम खनालसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी—
तपाईंहरुले विवेकशील साझा पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा व्याख्या गर्दै आउनुभएको थियो । केही दिनअघि मात्र तपाईंहरु विभाजन हुनुभयो । अब वैकल्पिक शक्ति नै विभाजन भएपछि त तपाईंहरुको योजनामै ठेस लाग्ला नि ?
म पार्टी विभाजन हुँदा पोखरामा थिएँ । मैले पनि त्यतिबेला केही सञ्चारमाध्यमका समाचार पढेर र हेरेर नै हाम्रो पार्टीका केही साथीहरु अलग भएका र निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको भन्ने जानकारी पाएँ । म त्यतिबेला निकै आश्चर्यचकित भएको थिएँ । उहाँहरु अलग हुनुभन्दा अघिका कुनै पनि छलफल र बैठकमा यस्ताखाले गम्भीर प्रकारका मतभेद, असहमतिहरु राखेको मलाई जानकारी छैन ।
भनेपछि उहाँहरु तपाईंहरुलाई समेत कुनै जानकारी नै नदिई अलग हुनुभयो होइन त ?
हो, मलाई पनि अचम्म लागेको छ । अहिले उहाँहरुले अलग भएपछि जुन खालका आरोप लगाउनुभएको छ । त्यस्ता आरोपका बारेमा बैठकमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।
तर, उहाँहरुले त तपाईंहरुको कार्यशैलीप्रति नै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक नै गर्नुभएको थियो त ?
हामी दुई पार्टी एक भएपछि धेरै पटक केन्द्रीय कमिटीका बैठक बसेका थियौं । ती बैठक निकै सौहार्द प्रकारका नै थिए । तर, अकस्मात संयोजक उज्ज्वल थापा अमेरिका जानुभएको थियो । उहाँ लामो समय अमेरिका बस्नुभयो । अमेरिकाबाट फर्किएपछि उहाँ पार्टीका मिटिङ बैठकहरुमा आउन छाड्नुभयो । उहाँले हामीसँग कुनै पनि सल्लाह नै नगरी पार्टीको समीक्षा गर्छु भनेर बाहिर सञ्चारमाध्यममा जानुभयो । उहाँले त्यहाँ नै कमजोरी गर्नुभएको थियो ।
आधिकारिक कमिटीमा कुनै पनि कुराकानी र सल्लाह नगरी त्यसरी सञ्चारमाध्यममा जाने कुरा काम मात्रै गर्नु भएन । हामीले यी विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि छ भने छलफल गरौँ भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका थियौँ । त्यो बैठक बस्नुभन्दा अघि नै उहाँहरुले अलग भएको घोषणा गर्नुभयो । हामीले त्यो बैठकमा उहाँका असन्तुष्टिका विषयमा सम्बोधन गर्ने नै भनेका थियौँ । त्यो मौकासमेत नदिई उहाँले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि विभाजनको अवस्था आयो ।
उज्ज्वल थापा समूहले तपाईंहरुबाट वैकल्पिक राजनीतिक दल बन्न नसक्ने देखेपछि आफूहरु अलग भएको आरोप लगाएका छन् नि ?
उहाँहरुको इच्छा र चाहनाको म कदर पनि गर्छु । उहाँलाई आगामी राजनीतिक यात्राको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । मेरो जानकारी अनुसार ३८ जनाको केन्द्रीय कमिटीका १६ जना साथीहरु नयाँ अभियानतिर जानुभएको छ । म फेरि पनि उहाँहरुलाई एक पटक शुभकामना भन्न चाहन्छु । तर, अहिले अलग भएर गएका अधिकांश साथीहरु यसअघि पनि बैठकमा सहभागी नहुने, पार्टीलाई समय नै नदिने र संगठन निर्माणको काममा अलिकति पनि नखट्ने प्रवृत्तिका हुनुहुन्थ्यो । मेरो विचारमा बढीमा चार–पाँच जना साथीहरु मात्रै अलिक सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अरु साथीहरु एकता प्रक्रियापछि नै एक ढंगले भन्ने हो भने निस्क्रिय जस्तै हुनुहुन्थ्यो ।
तर, उहाँहरुले मूल्य–मान्यता र विधि–प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ नि त ?
जहाँसम्म उहाँहरुले मूल्य–मान्यता र विधि–प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको भन्ने कुरा छ । यो नै गलत छ । हाम्रो पार्टी सबैभन्दा बढी मूल्य–मान्यता र विधि–प्रक्रियामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । तर, जसले बढी मूल्य–मान्यता र विधि–प्रक्रियाको कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले नै बढी उदण्डता व्यक्त गर्दा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो ।
हाम्रा कयौँ कार्यक्रममा उहाँहरुले त्यस्ता उदण्डता प्रस्तुत गर्नुभएको इतिहास पनि हामीसँग छ । कुन मुद्दा ? कुन निर्णय ? र कुन एजेण्डामा ? उहाँहरुको असन्तुष्टि हो उहाँहरुले बैठकमा राखेर समाधानको बाटो खोजेर जाने आधार पनि प्रशस्त थियो । तर, उहाँहरुले त्यो बाटो रोज्नु भएन । यो दुःखद कुरा हो । स्वयं उज्ज्वल थापाले पार्टीका कुनै पनि निकायसँग छलफल नै नगरी बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले त्यसरी सार्वजनिक गरेपछि पनि फेरि ती कुरा बैठकबाट ‘फेस’ गर्ने आँट गर्नुभएन । यो झन् दुःखद कुरा हो ।
उहाँको के कुरामा असन्तुष्टि हो भन्नेसमेत जानकारी नै नभई उहाँहरुले पार्टी विभाजनको प्रयास गर्नु यो उहाँहरुका लागि पनि त्यति सन्तोषजनक कुरा होइन । करिब डेढ महिना अघिको बैठकमा समेत उहाँले कुनै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थिएन । सबै कुरा सर्वसम्मत रुपमा नै पारित भएका थिए । अचानक उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो यो त भविष्यले पनि बताउला ।
तपाईंहरुको दलको नाम नै विवेकशील साझा छ । तर, तपाईंहरु साझा पनि बन्न सक्नुभएन । विवेकलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुभएन । नाम जस्तो व्यवहार नहुने रहेछ भन्ने पनि कुरा छ नि ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै हाम्रा केही साथीहरुको राजनीतिक चरित्र नै थिएन । उहाँहरु पहिला पनि बेलाबेला मैले भएको भएन भने पार्टी छाड्छु भन्दै धम्की दिनुहुन्थ्यो । यो चरित्रले पनि पार्टी विभाजन हुनुमा भूमिका खेलेको छ । हामीले धेरै पटक उहाँहरुलाई राजनीतिक चरित्र देखाउनु होला भनेर आग्रह पनि गरेका थियौँ । केही समय त उहाँहरुले यो आग्रहलाई मान्नु पनि भएको थियो । पार्टी बिस्तारै गतिशील ढंगले अघि बढ्न थालेको थियो । पछि बिस्तारै फेरि उहाँहरु त्यसै गर्न थाल्नुभयो हामीले उहाँहरुलाई राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरेर अघि बढौँ भन्ने कुरालाई सायद बुझाउन सकेनौँ कि यो सन्दर्भमा हमी असफल भयौँ ।
उहाँहरु फेसबुकमा लेखेर अथवा प्रचार गरेर मात्र चर्चामा आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । हामीलाई त्यो उचित लाग्दैनथ्यो । हामी संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । सञ्जाल फैलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौँ । हामी बेमेल यहाँनेर पनि थियो । हामी जनताका बीचमा जानुपर्छ भन्ने उहाँहरु सामाजिक सञ्जालमा जानुपर्छ भन्ने भएपछि पनि कुरो मिलेन ।